watchOS 6.2 beta 4 yave kuwanikwa kune vanogadzira | Ndinobva mac
watchOS 6.2 beta 4 yave kuwanikwa kune vanogadzira
La watchOS 4 beta 6.2 Izvo hazvina kusvika kusvika maawa mashoma apfuura pamaoko evanogadzira uye ndezvekuti mazuva mashoma apfuura vatove neiyo beta vhezheni dzeMacOS, iOS, tvOS uye iPadOS, asi iyo watchOS vhezheni yakanga isipo iyo yave kuwanikwa kune ivo.
Mune ino kesi, izvo zvitsva zvinoita kunge zvinotarisa zvakananga pa gadziriso inogadzirisa uye kugadzirisa matambudziko, hapana nhau dzinozivikanwa mune iyi nyowani beta vhezheni. Kune rimwe divi, kana paine chero nyaya inonakidza ikabuda, tichazogovana nemi mose.
Iyo Apple smart wachi ine chayo chitoro chayo chekushandisa chatinogona kushandisa pasina iyo iPhone uye iyi ipfungwa yekufunga nezvayo kubvira kusvika nguva pfupi yadarika maapplication aifanira kutorwa pasi kune iyo iPhone, mune newOSOS yakachinja. Isu tinogona kuve nekumwe shanduko mune yekupedzisira vhezheni kana kunyangwe inotevera vhezheni yesisitimu, asi nhasi ivo vari kutarisa kuti zvese zvitsva zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvakanaka.
Rangarira kuti idzi beta shanduro dzeApple smart wachi haibvumire "kudzikisira" saka zvakakosha kurega ivo chete vagadziri vadziedze, nekuti kana tikachiisa pawachi yedu uye dambudziko rikaonekwa, hatizokwanisa kuita chero chinhu. Isu tinochengeta wachi sezvairi uye kusatomboiendesa kuchitoro cheApple kunogona kugadzirisa dambudziko, saka chakanakisa chinhu siya vagadziri vane idzi beta shanduro uye isu tichaisa yepamutemo vhezheni painotanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 6.2 beta 4 yave kuwanikwa kune vanogadzira
Muvhiki ino, Apple Store muBergamo haizovhura magonhi ayo nekuda kwekonaona
Apple, isu tine iMac ine skrini hombe zvakadaro?